SuperTuxKart dia manampy fanatsarana sy vaovao amin'ny kinova farany | Avy amin'ny Linux
SuperTuxKart dia manampy fanatsarana sy fiasa vaovao ao amin'ny kinova farany
Angamba sy ny maro amin'ireo izay milalao matetika SuperTuxKart efa fantatrao ny momba ny fanatsarana sy ny vaovao ao amin'ny kinova farany amin'ity klone tsara indrindra an'ny ity Mario Kart, fa hatramin'ny nidirako Debian ho an'ny kinova 0.7.3, satria tsy hitako.
Hita fa nametraka SuperTuxKart kinova 0.8.3 ao amin'ny Arch Linux aho ary nahita endrika tamin'ny endriko hatramin'ny nidirantsika ny menio lehibe.
Izao dia manana isika MODY TANTARA !!! Tantara izay manomboka rehefa ny ratsy fanahy Nolok (izay milaza ny tenany ho Mpanjakan'ny Kart) dia maka an-keriny ny mpitarika ny mpihazakazaka, izay tsy iza fa ilay Wildebeest avy any GNU.
Manomboka amin'io fotoana io dia misafidy Kart isika ary tsy maintsy mandroso arakaraka ny isan'ny isa azontsika amin'ny ambaratonga. Tena mangatsiatsiaka daholo ny marina.
Mahatsiaro bebe kokoa aho fa ny sary sy ny endrik'ilay tany sy ny tarehintsoratra. Ary farany dia tsara tarehy i Suzanne (ilay rajako misambotra) satria tao amin'ny kinova Debian dia voaolana izy io, ary maro amin'ireo sari-tany no nohavaozina.
Nampidirina ihany koa ny fiasa, rehefa mandeha isika dia mahazo hafainganam-pandeha fanampiny. Ary koa, ny fitsapana ankehitriny dia somary sarotra kokoa.
Tena lasa ny marina .. Efa mila miala voly amin'ny fotoanako aho. 😀
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Games » SuperTuxKart dia manampy fanatsarana sy fiasa vaovao ao amin'ny kinova farany
Fantatro izao fa very anao izahay. Tena raiki-pitia amin'ny Arch Linux tsikelikely ianao ary azo ampiharina nefa tsy tsapanao akory. 🙂
avelao ny lafiny maizin'ny andohalambo hitaona azy hahaha
Fantatro fa i Elav dia manana Arch ho iray amin'ireo malalany taloha ajhaha
Ny klone Linux an'i Mario dia tena tsara, tsy fantatro fa nisy an'ity iray ity, sarotra ny manandrana azy io, misaotra ny fandraisana anjara.
Mampatsiahy ahy bebe kokoa ilay Crash Team Racing malaza, XD!
Miombon-kevitra aminao aho, satria mitovy amin'ny lalao izany.
Kakashi dia hoy izy:
oh eny, izao nihatsara ... tsara toy inona!
mifalifaly amin'izay .. hehehehe
Valiny amin'i Kakashi
Vaovao vaovao somary taloha ihany io, ankehitriny dia mila miandry ny kinova 0.9 isika vao hahita izay mitondra azy
Fatra-pitia loatra an'ity lalao ity aho, hany ka efa nandany ny hazakazaka rehetra tamin'ny volamena aho: P, ary mbola manohy milalao azy io, ho ahy dia ity no lalao tsara indrindra azo alaina ao amin'ireo trano fitahirizana.
Hey Elav .. Tiako ianao mba hanao lahatsoratra vitsivitsy momba ny Arch momba ny fanaingoana ny birao. Ahoana ny fampiasana ireo lohahevitra samihafa amin'ny sary masina, windows ary ny hafa. Manana fisalasalana kely momba ny fampiasana azy aho satria efa nahazatra ahy be ny gnome ary hitako fa tsy dia be izany, napetrakao tamin'ny kde ianao ary tiako ho fantatra bebe kokoa momba ny fitantanana an'ity birao ity. Ary nametraka Arch niaraka tamin'ireo mpamily maimaimpoana aho fa toa tsy dia mandeha tsara izy ireo. Andao lazaina fa azonao atao ny manazava ny fomba fifanakalozana eo anelanelan'ny maimaim-poana sy ny fananana amin'ny takelaka Nvidia. Mihevitra aho fa efa nanaparitaka azy… Nefa manantena aho fa misy zavatra azo hazavaina momba ny zavatra asehoko eto.
Salama Israel ..
Eny, mbola misy posta Arch vitsivitsy ao anaty fantsona, koa hiezaka aho hampifaly anao araka izay azoko atao. 😉
Tsara ho an'ny fanaingoana amin'ny birao. Ny tiako holazaina dia ny fanovana ireo sary famantarana Tray eo amin'ny bara. Ahoana ny fomba fampifangaroana lohahevitra ohatra ny fampiasana
lafika manjavozavo amin'ny lohahevitra iray ary ampiasao ny fisehon'ny lozisialy amina lohahevitra iray hafa. Satria efa nanandrana nanambatra azy ireo aho saingy tsy dia toa ny tokony ho izy amin'ny teôria hahaha ... Ary tsy isalasalana fa tsy andrasako ireo lahatsoratra manaraka ... Miarahaba sy misaotra ny valiny
Uh! Elaela aho tsy nilalao Super Tux Kart!
Tiako izany, mampihomehy be ny lalao ary ny tena marina dia toa mahafinaritra ahy ny fanaovana fomba tantara.
Manantena aho fa manana mode multiplayer amin'ny tamba-jotra izy io, satria talohan'ny nananako saingy niaraka tamin'ny masinina iray sy ny klavier dia sarotra ny mifehy eo anelanelan'ny roa.
Ao Debian dia misy ny Launchpad ppa hitazomana ny zava-misy hatrany.
(Ampiasaiko izy ireo ary tena milamina izy ireo, eny fa na ny Firefox alpha aza)
Alvarez alemana dia hoy izy:
Vaovao somary lany andro. Raha tadidiko tsara dia navoaka tamin'ny fiandohan'ity taona ity ity kinova ity.
Na izany aza, saika voatery foana ny mampanao an'ity lalao ity amintsika izay mankafy ny fizarana Linux.
Valiny tamin'i Alvarez Alemanina
Lalao tsara. Ny tena tiako indrindra dia isam-bolana na misy fiara na làlana.
Uhh Gaga ihany koa aho rehefa nanavao ny archlinux ary nahita ny fanatsarana tao amin'ny STK na dia efa somary efa antitra aza, ny zava-baovao novakiako tao amin'ny bilaogy dia ny lalana avy amin'ny Open Street Map dia azo alefa any amin'ny STK ary mieritreritra aho fa amin'ny kinova ho avy dia hisy olana fanampiny hanampy hahaha tena mahay aho amin'ity lalao ity, tsy misy clue sarotra amiko, na dia io ihany aza no lalaoviko hahaha
Ahoana no hametrahako azy amin'ny Kubuntu?
Manana boot roa aho, izany no mahatonga ny logite windows.
Azoko. Mbola manelingelina ahy ihany izy ireo rehefa manome hevitra momba ny Windows XP / Vista / 7/8 aho.
Raha ny amiko dia tsy namboariko ny SUDO noho ny antony ara-piarovana, miditra ho ROOT aho, manoratra "apt-get install supertuxcart" amin'ny fizarako miaraka amin'i Debian, mivoaka amin'ny ROOT aho miaraka amin'ny fivoahana sy lalao.
Novakiako manodidina fa manao fitsapana amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso Wii izy ireo hitarika ny fiara any Mar ... Midika izany, Tux Kart. Elav, fantatrao ve raha mampiditra an'io angaha ity?
Ny kinova farany dia efa ao amin'ny debian jessie, ary koa ao amin'ny backports wheezy
Daty tsara Hanomboka hilalao aho izao.
Misaotra, efa nandramako azy ...
Fampidinana sy fitsapana tsara 😀
Dikan-teny farany, midika izany fa tsy misy kinova hafa avoaka marina? D: toy ny 1.x? u__u! Nanana an'ity tetikasa ity bebe kokoa aho
Ny ankamaroan'ny famakiana amin'ny Andao hampiasa Linux: Jona 2013